Kedu ụdị ọgwụ nje dị iche iche kwesịrị inye maka ịkwanye hens - Ugbo ala ugbo - 2019
Ihe ọgwụ nje na-enye ọkụkọ
A na-azụkwa anụkọ anụ ọkụkọ ma na obere ugbo nakwa n'ugbo ma ọ bụ ulo ozuzu okuko site na gburugburu ebe obibi. N'okpuru mmetụta nke ihe dịgasị iche iche, ụmụ anụmanụ na ndị okenye nwere ike ịrịa ọrịa, ọgwụ nje ga-abụ nzọpụta nke ọnọdụ ahụ.
Taa, anyị ga-ekwu maka mmetụta nke ọgwụ ọjọọ na ọrụ ha na ndụ ọkụkọ.
Ụdị ọrịa ahụ
Ndepụta ọgwụ nje
Ọgwụ dị iche iche
Atụmatụ Ncha Mgbochi Antibiotic
Esi eme ihe na otu esi eji dochie ọgwụ nje na ọkụkọ: nyocha
Ọgwụ nje maka ọkụkọ
Nnụnụ ahụ, nke ọtụtụ ndị ikwu ya gbara ya gburugburu, dị nnọọ mfe, ihe ọjọọ ọ bụla nwere ike ime ka ọrịa na ọrịa nke ndị ahụ ike. Otu ọkụkọ nwere ike ibibi ụlọ ahụ dum.
N'ime ọgwụ ndị na-egbochi nje na nje bacteria, ṅaa ntị na Solikoks, Brovaf ọhụrụ, Streptomycin, Baytril, Biovit-80, Baykoks, Lozeval, Enrofloks, Enroksil, Nitox 200, Enrofloxacin, Metronidazole.
N'iji ọgwụ nje mee ihe na mgbaàmà mbụ nke ọrịa ahụ na-ebelata ihe ize ndụ ndị a ma mekwuo ka arụpụtaghị ihe ọkpụkpụ n'ọdịnihu. Na -emepụta microorganisms nke nwere ike iji n'ime nnụnụ banye n'ime ụlọ ahụ, ọgwụ dị ka ihe mgbochi na-eme n'ọdịnihu nke mmepe nke ọrịa na-efe efe ma ọ bụ ọrịa nje.
Ị ma? N'etiti ụdị anụmanụ dị iche iche, ọ bụ naanị nnụnụ nwere ike ịchọpụta ya, dịka ọmụmaatụ, silk siliki. Ndị a nwere akpụkpọ anụ na-acha anụnụ anụnụ, gụnyere agba nke onu okuko, ma osisi ahụ nile abụghị feathers na akpụkpọ anụ siri ike, ma snow na-acha ọcha na-acha ọcha, gbakwunyere ụfụ na-acha ọkụ n'isi.
Ọgwụ dị iche iche, karịsịa ọgwụ nje, nwere ike ịdị ize ndụ, ebe ọ bụ na ime n'ime ahụ na microflora ahụ nwere ike imetụta ezi osisi nke eriri afọ, dịka ọmụmaatụ, maọbụ ọrụ nke akụkụ ndị ọzọ. Usoro ọgwụgwọ, na mgbakwunye, nwere ike ịkpalite nrụgide na nwa.
Iji zere nke a, e nwere ọtụtụ iwu:
na-agbaso usoro onunu ogwu nke onye ọkachamara kwuru;
Ejila ọgwụ ike eme ihe ike;
jiri ya mee ihe na-enweghị isi, na enweghi ike ịnweta ụzọ ndị ọzọ nke ọgwụgwọ;
Ọ dị mkpa ijikọta ọgwụ ọjọọ na probiotics.
Ugbo ogwu nwere ikike imubanye n'ime aru ruo nwa oge, mgbe a kpochapuru ha n'eziokwu.
Ọ dị mkpa! Ekwesiri ighota na nsen na anu ulo ozuzu mgbe ha gesiri usoro ogwugwu aghagh adia ha rue izu abua na nkeji: o nwere ike iburu onye ozo nsogbu. Ihe foduru nke ihe ndi ejidere n'ime aru mmadu, ga - eme ka o nwelata oke nsogbu na mmuta nke microorganisms nke na - eguzogide ọgwụ.
Dịka e kwuworo, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe mgbe ikpe na-adịghị. Ọrịa na-achọ ọgwụgwọ pụrụ iche gụnyere akụkụ abụọ nke ọrịa: ọrịa na-emerụ ahụ.
Ọrịa ndị dị ize ndụ bụ n'ihi na ha na-efe efe. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-ebute site na ụrọ mmiri, ndị ọzọ - site na mmiri na nri. Ya mere, ịkwesịrị ileba anya na ịdị ọcha nke ụlọ ahụ, nyochaa ngalaba ha iji gbochie mmerụ nke mmadụ dum.
Ndepụta na-ezughị ezu nke ọrịa ndị dị ize ndụ nke a pụrụ iji ọgwụgwọ mee ihe bụ:
Ọ dị mkpa! Ọrịa ndị dị ka pseudotum (ọrịa Newcastle), mmerụ ahụ, ọrịa na-efe efe na-adịghị emeso ha, ọbụna site n'enyemaka nke ọgwụ ike. Ọgwụ ọjọọ nwere ike ibelata ihe mgbaàmà ahụ, ma a na-atụ aro nnụnụ dị otú a ka ọ bụrụ nke a, ọ gaghị ekwe omume iri nsen ma ọ bụ anụ.
Ndị na-ebu nje ndị na-ebute ụdị ọrịa ndị a bụ ụmụ ahụhụ (anụ), òké, nnụnụ ọhịa, ọkụkọ azụ, slugs na snails. Ngwurugwu ahụ, ọ bụrụ na ị chọpụta oge nchịkwa, jikwaa mebie usoro mkpanaka nke nne okuko, meghere ụzọ maka nje bacteria na nje virus, ọrịa; na-emerụ akụkụ anụ ahụ, na-eri nri ha; usoro ụjọ; emetụta ya.
N'ime ọrịa parasitic nkịtị bụ ihe ndị a:
Azụ ndị na-eri ihe na nku
Mkpụrụ ọgwụ ndị kasị dị irè, ihe ha na-egosi na mmetụta ndị nwere ike ime, anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Mụta maka ọgwụ ndị ọzọ: Levamisole, methylene blue, Alben, E-selenium, Amprolium, Fosprenil, Trivit, Gamavit, Ligfol, Tromeksin, Tetramizol.
Akpanyere ya na ụdị ntụ, a na-etinye ya n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ:
Eji ya mee ihe maka ọgwụgwọ intramuscular, dose nke 2 mg kwa 2 ml mmiri, ugboro atọ n'ụbọchị. Mgbe a gbakwụnyere ihe ọṅụṅụ, a gbakọọ usoro ọgwụ 1 mg kwa 1 liter mmiri, ugboro atọ n'ụbọchị, ruo ụbọchị ise nke ọgwụgwọ. A na-ahụ mmetụta dị iche iche n'ụdị allergies, ọ bụrụ na enweghi ike ịnweta ya, nsị usoro ga-eweta nsị. N'ikpeazụ, ọgwụ ahụ adịghị mma, ọ dịghị emetụta akpụkpọ anụ mucous nke akụkụ ahụ.
Ị ma? Nnukwu akwa nke nwere kilogram iri abụọ na abụọ ka otu ọkụkọ sitere na UK aha ya bụ Gariet. Ntinye ntinye dị na Guinness Book of Records.
A na-eji ọgwụ nje eme ihe n'ịgwọ ọrịa dị otú ahụ:
ọrịa ịba ahụ ọkụ;
A na-etinye ọgwụ ahụ n'ịṅụ mmanya ma ọ bụ nri na ọnụego gram ise maka nnụnụ na-eto eto. Oge ịbanye - ụbọchị isii, ugboro atọ n'ụbọchị.
Onye ọrụ ahụ enweghi mmetụta ọ bụla, mgbe ị na-edebe usoro a gosiri.
Leba anya na oria nke ọkụkọ.
Ngwọta maka oria mmiri, dị ka:
A na-agbakwunye ọgwụ ahụ na ndepụta ahụ n'ụdị (dose kwa ụbọchị):
ọkụkọ ụbọchị iri - 2 mg kwa iri nnụnụ;
mgbe ọ dị afọ - 3 mg;
ndị okenye - 4 mg.
A na-ekewa ọnụego kwa ụbọchị gaa n'ọtụtụ oriri, oge nkeji n'etiti ha bụ ọ dịkarịa ala awa isii, usoro ahụ dum adịghị adị karịa ụbọchị iri.
Mụta otu esi enweta akọrọ, ọnyá site na ọkụkọ.
Mmetụta megide nje ndị na-esonụ:
ọrịa iku ume.
A na-ejikọta ọgwụ ahụ na nri, nye ya ugboro atọ n'ụbọchị, gram 30 kwa kilogram nke dị arọ. Oge ikuku bụ izu abụọ. Enweghi mmetuta uto.
Chọpụta ihe kpatara ọkụkọ ji esi ala, ihe mere ha ji daa, ha na-agba ọsọ, ha na-atụkọta àkwá na onye ọ bụla ọzọ ruo mgbe ọbara.
A na-eji ọgwụ eme ihe megide mycoplasmosis., tụgharịa na mmiri ma nye ya ihe ọṅụṅụ na dose 40 mg kwa kilogram nke uka. Ogologo ọgwụgwọ - ụbọchị asaa, ọ ga-ekwe omume ikwugharị n'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ezigbo nsonaazụ. Ebumnuche nke nwere ike ime bụ nkwụsị nke ihe ndị dị na ngwugwu ahụ.
Ntube nke ihe di iche iche di iche iche na-eme ka o jiri ha mee ihe n'enweghi ule, ma oburu na ọnọdụ ahu di nkpa. Dị ka ọ dị, ọgwụ ndị a nwere obere nsí na, na-agbaso ụkpụrụ ndị akọwapụtara na ntụziaka ahụ, enweghị mmetụta ọjọọ na ahụ.
Ụmụ anụmanụ na-eto eto kachasị nwee ike ịnweta ọrịa dịgasị iche iche, chọpụta ụdị ọgwụ kwesịrị ịbụ ihe enyemaka maka ọkụkọ, nke na-eme ka ọkụkọ na-arịa ọrịa.
A na-eji ọgwụ na-agwọ ọrịa, nsia, ọrịa nje.Ọ dị irè ma n'ime mgbochi na ịgwọ ọrịa na-adịghị ala ala na nsogbu ndị ọrịa coli, pasteurellosis na ndị ọzọ kpatara.
Jiri ihe oriri ma ọ bụ gbakwunye na mmiri na-aṅụ ihe ọṅụṅụ 1 gram kwa liter nke mmiri ma ọ bụ 2 grams kwa kilogram nke nri. Ogologo oge nnyefe bụ ruo ụbọchị ise.
Site n'inwebiga ihe ókè, dysbacteriosis kwere omume.
Gụọ ndepụta nke ọrịa ndị ọrịa na ọkụkọ.
Otú ọ dị, ọgwụ ndị na-adịghị ala ala, na-egosi ike dị ukwuu n'ọgụ a na-alụso ọtụtụ ọrịa:
Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị ise, ingestion na mmiri - aka 10 mg kwa liter. Mmetụta ọjọọ na ahụ adịghị anabata iwu.
Enweghị nsogbu ọ bụla na ịmecha ahụ ọkụkọ site na nkwadebe ọgwụ, ọ bụrụ na ị na-agbaso ọtụtụ iwu:
nke mbụ, mweghachi nke microflora eriri afọ. Mgbe a na-agbakwunye ya na ndepụta bacteria bara uru, mmiri ara ehi na - eri cheese, yogurt, ryazhenka;
ọ dịkwa mkpa inye nnụnụ na ịṅụbiga mmanya ókè na ịṅụ mmanya ka ọ dị ọcha;
eme nke ọma na vitamin ọgwụ ọjọọ - elu, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi;
Ọ na-achọsi ike ịhazi ije na ikuku ọhụrụ.
N'ikpeazụ, ọ ga-ahụrịrị na ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-amalite na-eme otu ihe dị njọ: na-agbalị ichebe anụ ụlọ ha, ha na-amalite na-ebute ọgwụ nje n'oge na-adịghị anya. A ghaghị ime nke a mgbe ọkụkọ nwere microflora nke ya. Nke mbụ, a na-eri nnụnụ na vitamin na mineral, ma na-eduzi ọmụmụ mgbochi.
Video: Ọ bara uru ịgwọ nnụnụ na ọgwụ nje?
mgbe naanị ịzụrụ ọkụkọ mbụ, 4 PC. M zụtara ya site n'ubi ugbo iji zọpụta ego, na ndị fọdụrụ site na dedulki "ụlọ". O kwuru, sị, "Were, na-enweghị ọgwụ nje, na-eto eto." Dị ka ihe m kwuru si chọpụta. Anu ulo di nma, di ike, o di mma karia, ha nwere mma frosts, ha gbaghariri oyi nile, molt na-aga ngwa ngwa, otu abiaola ugbua. Ụfọdụ na-akwụ ụgwọ maka ọnwa 2 site n'ugbo ulo ozuzu, oge oyi adịghị agba ọsọ, enwere ọnyá na scallops, mgbe ahụ, nku na-apụta. Na-enweghị ọgwụ nje, enweghị ike ime. Ma n'echiche nke m, a ghaghị iji ha mee ihe dị oké njọ.
Otu ude (dịka ọmụmaatụ, nkelosan) dị mma, n'ezie, jikọta n'ime mmiri ọṅụṅụ ma mee ka ọkụkọ nile ṅụọ mmanya maka prophylaxis. Ma ndị ọrịa kachasị njọ dị mma iji wụsa pipette ma ọ bụ sirinji n'otu n'otu. Ọ bụ ihe nwute na nnụnụ nnụnụ adịghị eto eto, ma ọ bụghị na ọ ga-anwa ịnye ya site na afọ ọsịsa, oleekwa ihe ọzọ si na-ewu ewu nwere ike iji ya na mmiri ọkụ ọkụ?
Osisi dị mma! Ma o yikarịrị ka ha nwere ike igbochi ụmụ nnụnụ ahụike. Ọ dị mma inye nsị, decoctions nke chamomile, marigold, marigold. Ọ bụrụ na ọrịa ahụ enweta, mgbe ahụ, mkpuru akwụkwọ agaghị enyere aka (enwere m echiche a) ebe a ma ọ bụ azu axis ma ọ bụ ọgwụ nje.
A na-agba akwụkwọ na strawberries: otú e si alụ ọgụ
Ojiji aloe na mmanụ aṅụ na nkà ọgwụ ọdịnala maka ọgwụgwọ nke afọ
Nzuzo nke nri nke akwukwo nri: Gini bu ihe di nma na shuga?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe ọgwụ nje na-enye ọkụkọ